Camicri Cube: An Offline And Portable Package Management System – Ubuntu MM
18/07/2014 ·4min read
Ubuntu မှာ Software တွေ သွင်းဖို့ Internet လိုနေတဲ့ အတွက် စိတ်ပျက်ဖူးပါသလား ?
Software တွေကို သူတို့ရဲ့ မူရင်း Website မှာ Download ချပြီး Manually Install လုပ်လို့တော့ ရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် Dependencies တွေ အဆင်မပြေလို့ စိတ်ညစ်ရဖူူးပါသလား ?
ဒါဆိုရင် Camicri Cube က သင့် အတွက် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
1.What is Camicri Cube?
Camicri Cube ဆိုတာကတော့ Ubuntu Software Center လိုပဲ Package Manager ဖြစ်ပါတယ် ။
သူ့ကို USB Drive ကလေးမှာသွင်းထားလိုက်ပါ ။ ပြီးရင် တခြား Internet ဆိုင်က စက်မှာ မိမိ နှစ်သက်တဲ့ Software ကို Camicri Cube ရှိတဲ့ Stick ကလေးထဲက သွားသွင်းထားလိုက်ပါ ။ ပြီးတာနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် Internet မရှိတဲ့ စက်မှာ ခုနက သွင်းခဲ့တဲ့ Software လေးကို ပြန်သွင်းနိုင်ပါပြီ ။
သူဟာ အိမ်က စက်ရဲ့ OS Detail နဲ့ အခြား Information အတိအကျကို ယူပြီး မှတ်ထားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Dependencies တွေ အဆင်မပြေတာမျိုး ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
တကယ်လို့ Camicri Cube ကို Download ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့
သူ့ရဲ့ Official Launchpad Website ဖြစ်တဲ့
Sourceforge က ဖြစ်စေ
အောက်က Command နဲ့ ဖြစ်စေ
Download ဆွဲ ရယူနိုင်ပါတယ် ။
ပထမဆုံး အနေနဲ့ Download ချပြီး ယူထားတဲ့ Zip File ကို Right Click ထောက်ပြီး Extrack လုပ်လိုက်ပါ ။
ပြီးတာနဲ့ cube ဆိုတဲ့ Folder ထဲကို သွားပါ
cube-normal ဆိုတဲ့ File ကို နှိပ်ပါ ။ Run ဆိုပြီး တောင်းရင် Run လိုက်ပါ ။ ဒါဆိုရင် သူ့ Software တက်လာပါ လိမ့်မယ်
3.1 Creating Project and Setting Up
ပထမဆုံး ကျွန်တော်တို့ စတင် အသုံးပြုဖို့ အတွက် Camicri Cube မှာ Create Project ဆိုပြီး စလုပ်ပါ့မယ် ။
နောက်ပြီးရင်တော့ Repo အသစ်တွေများရှိသလား ရှိရင် Download List အတွက် Update လုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုမှုတွေ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ် ။ အခုတော့ အိမ်က စက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အင်တာနက်မရှိတာေ ကြာင့် Cancel ဆိုပြီးပဲ ထားလိုက်ပါတယ် ။
Repo တွေ Download လုပ်ဖို့ မလိုတဲ့ အတွက် သူ့ရဲ့ မူရင်း Folder ရှိရာကိုပဲ ပြန်သွားလိုက်ပါ ။ Project ဆိုတဲ့ Folder အောက်မှာ ခုနက Create လုပ်ခဲ့တဲ့ Project Folder တစ်ယောက် ရောက်နေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။
အဲ့ဒီ့ Folder ထဲမှာတော့ အိမ်က အင်တာနက်မရှိတဲ့ စက်ရဲ့ Information တွေ ပါဝင်ပါတယ် ။
ဒါဆိုရင် ရပါပြီ Cube Folder လိုက်ကြီးကို USB Drive ထဲကို ထည့်ပြီး အင်တာနက်ဆိုင် တစ်ဆိုင် ကို ယူသွားလို့ရပါပြီ ။
3.2 Downloading Apps in interconnected devices
တကယ်လို့ အင်တာနက် ဆိုင်က စက်က Windows ဖြစ်ရင်တော့
Gsharp ဆိုတာကို အရင် သွင်းထားဖို့လိုပါတယ် ။
GtkSharp : http://download.xamarin.com/GTKforWindows/Windows/gtk-sharp-2.12.21.msi
.Net Framework မရှိရင် .Net framework ပါ သွင်းထားဖို့လိုပါတယ် ။
DotNet 4.0 : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718
USB Drive ထဲက Cube Folder တစ်ခုလုံးကို My Document Folder အောက်မှာ ထားပြီး cube.exe ကို ရှာ ဖွင့်လိုက်ပါ ။
ဒါဆိုရင်အောက်မှာ Open Existing Projects ဆိုတာကို တွေ့ပါလိမ့်မယ် ။ Open လိုက်ပါ ။
ဒီ တကြိမ်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ Internet လည်း ရှိနေတဲ့ အတွက် Repo တွေကို Update လုပ်ပါ့မယ် ။
တချို့ Software တွေ Out of Date ဖြစ်နေတယ် ။ Update Version အသစ် ထွက်နေတယ်ဆိုရင်လည်း တခါထဲ Download ချလို့ရပါတယ် ။
ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ Software ကို ရှာပြီး Download လုပ်လို့ရပါပြီ
အခုတော့ ကျွန်တော်တို့ Game လေး တစ်ခုကို စမ်းပြီး Download ချကြည့်ရအောင် ။
ဒါဆိုရင်တော့ Download လုပ်နေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။ လိုအပ်တဲ့ Dependencies တွေစစ်ပြီး Download စလုပ်တာ တွေ့ရပါတော့မယ်
3.3 Installing in your PC
Cube Folder ကို နှစ်သက်ရာ နေရာမှာ ကူးယူလိုက်ပြီး ဒီ တစ်ခါတော့ ပထမ တစ်ခါတုန်းကလို cube-normal မဟုတ်ပဲ cube-superuser ဆိုတာကို ဖွင့်လိုက်ပါ ။
Super User ဆိုတဲ့ Alert ကလေးကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါဆိုရင်တော့ ခုနက Download ဆွဲထားတဲ့ App တွေကို ပြန်သွင်းနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ Update လုပ်ထားတာတွေရော ပါ အကုန်သွင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Mark All Download ကို ရွေးလိုက်ပါ ။
ဒါမှ မဟုတ် မိမိ နှစ်သက်ရာ တစ်ခုထဲကို ပြန်သွင်းမယ်ဆိုရင်လည်း ရပါတယ် ။ ရွေးချယ်ပြီး Install လုပ်ပေးရုံပါပဲ ။
Install ဆိုတာကို လုပ်ပြီး စတင် အသုံးပြု ဆော့ကစားနိုင်ပါပြီ ။